PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-21 - Ugxeka izikhulu zetheku "owamahlaya"
Ugxeka izikhulu zetheku "owamahlaya"
Ukukhothanyelwa Uthi zifuna
Ilanga langeSonto - 2018-01-21 - Izindaba - LUCKY CAIN
UMHLELI wemicimbi yamahlaya odumile ukhala ngezikhulu zikahulumeni athi zizenza “onkulunkulu” ngemali yabakhokhi bentela - uzisola ngokuthi zifadalalise iphupho lakhe lokuqhubeka nokuthuthukisa umkhakha wamahlaya KwazuluNatal.
Umnu Monwabisi Grootboom ozakhele udumo ehlela imicimbi yamahlaya ebizwa nge-99% Zulu Comedy futhi obeyisikhulu kumasipala wetheku uthi kubuhlungu ukuthi kunezikhulu ezifuna ukukhothanyelwa kunokuba zibheke uhlelo lokuthuthukisa umphakathi oluhlongozwayo.
“Lezi zikhulu ikakhulu kumasipala wetheku kazibheki ukuthi uhlelo oza nalo luzowusiza kanjani umphakathi kodwa kunalokho zifuna ukukhonzwa bese ziphasisa izinhlelo ezingayi ndawo,” kusho umnu Grootboom oshiye isigubhukane kulo masipala eminyakeni emibili eyedlule.
Uthi namanje usenesilonda esisankenketha ngokuthi uhlelo lwakhe lwendumezulu yamahlaya alukaze lusukunyelwe ekubeni lo mkhakha ukhombisa ukukhula.
“I-99% Zulu Comedy ikhiqize inqwaba yosomahlaya asebephila ngawo amahlaya, bondla imindeni futhi bazihlelela eyabo imicimbi.
“Kubuhlungu ukuthi uma uqhamuka nohlelo lokuqhubeka nokuthuthukisa lo mkhakha utshelwe kwezikabhoqo ukuthi kalukho eqhulwini ekubeni kuxhaswa izinhlelo zaphesheya (kwezilwandle) ezingawenzeli lutho umphakathi wakuleli (eningizimu Afrika).
“Uma ubheka i-essence iwuhlelo lwaphesheya olungabenzeli lutho abantu basethekwini kodwa sinika izizumbulu izwe eselithuthukile ekubeni siyizwe elisakhula. Yinto enjani leyo?” kubuza umnu Grootboom.
Wengeze ngokuthi uyajabula uma ebona osomahlaya abebeyingxenye yohlelo lwakhe phambilini bedlondlobala.
Kuzokhumbuleka ukuthi umnu Grootboom umemezele ukuthi uzimisele ngokwenza indumezulu yamahlaya ebizothatha izinsuku ezine kodwa yagcina ingenzekanga.
Uthi isizathu yikho ukuthi kunezikhulu ezithile ezifuna ukukhothanyelwa ngemali yabakhokhi bentela. Nokho akazidaluli lezo zikhulu zikamasipala akhala ngazo umnu Grootboom.
“Le ndumezulu bekungeke kube ngeyami kuphela kodwa bekuzozuza abantu abaningi ngayo futhi ikhulise nomkhakha wamahlaya. Okungijabulisayo wukuthi njengoba sengifudukele egoli ngisezingxoxweni eseziseqophelweni eliphezulu nomasipala wasetshwane.
“Lo masipala ukhombisa intshisekelo entweni engabe kade yenzeka ethekwini,” kusho umnu Grootboom obhale incwadi yothando nomkakhe uphindile esihloko sithi “Love Isn’t For Cowards”.
Uthi akazisoli ngokufudukela egoli kwazise ujabule futhi impilo imhambela kahle njengoba esengene shi kwezamabhizinisi.
UMNU Monwabisi Grootboom ukhala ngezikhulu ezifuna ukukhothanyelwa ngemali yabakhokhi bentela. Lapha uthathwe nomkakhe, Phindile.